China L-Isoleucine CAS 73-32-5 maka ndị na-emepụta Pharma (USP / EP) | Ekele
Aha ngwaahịa ：: L-Isoleucine
L-Isoleucine (Abbreviated Iso) bụ otu n’ime amino acid 18 a na-ahụkarị, na otu n’ime amino acid asatọ dị mkpa na ahụ mmadụ. A na-akpọ ya amino acids (BCAA) nwere njikọta na L-Leucine na L-Valine ọnụ n'ihi na ha niile nwere ngwongwo methyl n'akụkụ ngwongwo ha.
L-Isoleucine bụ otu ihe dị mkpa amino acid nke anụ ahụ na-enweghị ike ime ma mara ya maka ikike iji nyere aka ntachi obi ma nyere aka na nrụzi na iwughachi akwara. Amino acid a di nkpa nye ndi na-aru aru dika o n’eme ka aru na agbalite ume ma n’enye aka n’aghaghachi omumu.
Mmetụta nke L-Isoleucine gụnyere mmezi akwara na leucine na valine, na-achịkwa glucose ọbara, na inye anụ ahụ ume. Ọ na-emekwa ka mmepụta nke hormone nke na-eto eto ma na-enyere aka ịse abụba visceral. Abụba a dị n'ime ime ahụ ma ọ nweghị ike ịgbarie nke ọma naanị site na nri na mmega ahụ.
L- Isoleucine nwere ike ịkwalite njikọ protein ma melite ogo nke hormone na insulin, iji kwado nguzozi na ahụ, nwere ike ịbawanye ọrụ ahụ, na-agwọ ọrịa uche, iji kwalite mmụba nke agụụ na ọrụ nke mgbochi anaemia, mana nakwa nkwalite nke insulin secretion. Tumadi na-eji na nkà mmụta ọgwụ, nri ụlọ ọrụ, na-echebe imeju, imeju ọrụ akwara protein metabolism dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ na enweghị, a ga-enwe ọdịda anụ ahụ, dị ka ọnọdụ nke amaghị onwe. Enwere ike iji glycogenetic na amino ketogenic mee ihe dị ka ihe mgbakwunye. Maka amino acid infusion ma obu tinyekwa ihe oriri.
Isi nri kachasị mma maka L-Isoleucine gụnyere osikapa agba aja aja, agwa, anụ, akụ, nri soybean na nri niile. Ebe ọ bụ na ọ bụ ụdị amino acid dị mkpa, ọ pụtara na enweghị ike ịkpụ ya na ahụ mmadụ ma nweta naanị site na nri.
Ntughari a kapịrị ọnụ [a] D20
Ntughari a kapịrị ọnụ [a] D25
+ 38.9 ° - + 41.8 Celsius
doro anya & enweghị ntụpọ ≤BY6
adịghị ọcha mmadụ≤0.5% mkpokọta adịghị≤.0.0%
Ninhydrin nwere ihe dị mma
Organic obodo adịghị
Nke gara aga: L-Threonine CAS 72-19-5 maka ọkwa Pharma (USP)
Osote: L-Threonine CAS 72-19-5 maka Nri Nri (FCC / AJI / USP)
L-Threonine Pharm ọkwa, L-Valine 72-18-4, Gralọ ọgwụ Pharm L-Leucine, 73-32-5 L-Isoleucine, Nri oriri na-edozi ahụ, L-Threonine Nri Nri,